Puntland oo Ciidamada uga digtay inay ku milmaan Siyaasadda - Awdinle Online
Puntland oo Ciidamada uga digtay inay ku milmaan Siyaasadda
Taliska Ciidamada Booliska Maamulka Puntland ayaa uga digay guud ahaan Ciidamada inay ku milmaan siyaasadda, xilli Puntland ay wado diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Golaha degaannada Maamulkaas.
Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Janeraal Cabdi Xasan Xuseen ayaa sheegay in Ururada siyaasadda ay u siman yihiin Booliska, isla markaana aysan ka aqbaleyn Ciidamada inay Urur gaar ah u hiiliyaan ama ku biiraan, taasina ay mamnuuc ka tahay.
Sidoo kale Taliyaha waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in Puntland ay diyaarisay Ciidamo qaba tababar gaar ah oo ku saabsan ilaalinta degaanka si uusan u dhicin nabaad guur, isla markaana loo dhaqan geliyo Amaradii kasoo baxay Wasaaradda degaanka iyo isbedelka Cimilada Puntland.
Ugu dambeyn Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Janeraal Cabdi Xasan Xuseen waxaa uu sheegay in Puntland sidoo kale ay mamnuucday Gawaarida aan taargooyinka laheyn, isla markaana Gawaari qaarkood ay leeyihiin Mas’uuliyiin ka tirsan Puntland la qab qabtay.
Warkaan kasoo baxay Taliska Ciidamada Booliska Puntland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan Puntland ay qorsheyneyso in doorashada soo socota ay noqoto mid lagu galayo Xisbiyo, sidoo kalena dhamaan degmooyinka & Gobolada Puntland loo sameeynayo Gole degaan.
Previous articleKenya oo ka digtay inay joojin karto duulimaadyada bani’aadannimo ee Soomaaliya
Next articleLaamaha Amniga oo toogtay Nin hubeysnaa